Guddoonka labada aqal ee Barlamaanka oo isku khilaafay shirka baarlamaannada federaalka ah – Kalfadhi
Khilaaf la xiriira loollan dhinaca sharciga ah ayaa soo kala dhexgalay guddoonka Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya. Wuxuu salka ku haaya shir uu qaban-qaabinayo guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari) oo la filaayo inuu dhowaan ka dhaco magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Shirkaas waxaa lagu casuumay guddoomiyeyaasha baarlamaannada maamul-goboleedyada dalka.
Warbaahinta oo ka warhaysay abaabulka shirkaas ayaa heshay warqad cabasho ah oo uu soo saaray Guddoomiyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi, taas oo guddoomiyeyaasha baarlamaannada maamul-goboleedyada looga digayay ka qeybgalka shirka.
Warqadda oo uu mudane Cabdi Xaashi u kala diray madaxweyneyaasha iyo guddoomiyeyaasha baarlamaannada maamul-goboleedyada ayaa la ogeysiiyay Madaxweynaha iyo Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee dowladda dhexe. Wuxuu ku dalbaday in la joojiyo shirka lagu qaban doono Baydhabo, kaas oo uu ku tilmaamay mid lagu bur-burinayo, laguna kala dhantaalayo nidaamka federaalka ah.
Qoraalka oo ahaa mid kulul ayaa lagu sheegay in Golaha Shacabka uu u shaqeynayo sidii Baarlamaankii 9-aad. Xilligaas ma aanu dhisneyn Aqalka Sare, sidaas darteed waxaa lagu wargeliyay in Aqalka Sare uu u xil saaran yahay matalaadda maamul-goboleedyada iyo inuu yahay gole ilaaliya ku dhaqanka iyo xoojinta nidaamka federaalka ah.
Waxaan la ogeyn warqadda soo baxday sida ay wax uga beddeli karto qaban qaabada shirka Baydhabo ee goleyaasha sharci-dajinta dalka. Waa tusaale kale oo muujinaya baahida weyn ee loo qabo dhameystirka dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya.
HOOS KA AKHRISO WARQADDA GUDOOMIYAHA AQALKA SARE